Banyere Anyị - Jiangsu Runau Electronics Manufacturing Co., Ltd.
Gbanwee zuru oke, Meezu oke
Runau Eletrọniki Manufacturing Co., Ltd bụ onye na-eduzi ndị na-emepụta ngwa ọrụ ọkụ ọkụ na China. Site na teknụzụ na imepụta ụwa niile amatala ma nakweere ya, ndị guzobere Runau Electronics etinyela aka na ụlọ ọrụ semiconductor dị elu na China maka ihe karịrị afọ 30. Runau enwetawo nka iji nye ihe ngosiputa ohuru ohuru n'ime nyocha, imewe, mmepe, ihe nlele, na imeputa ihe omuma ndi ozo di elu, modul ike, na ngalaba nzuko nke usoro eji aru oru. Runau nwere ikike zuru oke iji hụ na inye steeti steeti ngwa ọrụ elektrọnik na arụmọrụ ya. Mgbe ọ bụla ihe chọrọ, anyị technicians, injinia, mmepụta otu na ahịa ike na-arụ ọrụ anya na ndị ahịa anyị iji hụ na elu mma, na-oge nnweta, na energetic arụmọrụ nke ha eletriki ụlọ ọrụ.
Ejiri ụlọ 1000m2 na ụlọ ọrụ 1000m2 dị ọcha, ụlọ ọrụ 100s setịpụrụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe kachasị elu yana akụrụngwa, ndị otu nwere ọgụgụ isi kachasị nke 70s nwere ọrụ ọrụ na usoro mmepụta, ndị injinia ọkachamara 12 na ndị ọrụ ntanetị (4 ndị injinia ọkachamara) na R&D na ngalaba na-arụpụta ihe. . Akpọrọ Dr. Henri Assalit, onye ama ama na ụlọ ọrụ ọkụ ọkụ ọkụ America, ka ọ bụrụ onye ndụmọdụ mmepe mmepe. Ejiri usoro ihe eji egbusi ihe na ihe eji eme ihe na Runau iji gosiputa uru ndi ozo na uzo.
Site na mmepe na-aga n'ihu na teknụzụ na-aga n'ihu na-etinye n'ọrụ, Runau bụ ọkachamara a ma ama na ogo dị elu na arụmọrụ arụmọrụ ngwaọrụ ndị na-arụpụta na China, kaadị akara gụnyere:
● Thyristor & rectifier diode mgbawa, square thyristor mgbawa
● Thyristor & rectifier diode, welder diode, GTO, pịa-mkpọ IGBT, ike modul na mgbakọ.
● Ogwe thyristor mgbawa
● 6”Thyristor & rectifier na 8500V akwa voltaji ngwaọrụ dị na mmepụta akara.
A na-eji nkà nke ngwaahịa eme ihe na traction eletrik, na-agagharị, na-ekpo ọkụ ọkụ, na-eme ka ọkụ eletrik, electrolysis, onye na-agbanwe agbanwe, onye nro dị nro, onye na-agba ọsọ ọsọ, UPS, SVC & SVG na ngwa ụlọ, wdg.
Runau ketara na mmeghachi omume ọsọ ọsọ, mmụba na-aga n'ihu, yana atụmatụ ọrụ mba ụwa. Runau ga-aga n'ihu na-enye ihe ndozi na ndị ahịa ịgbadoro anya n'ọhịa nke ọkụ ọkụ dị elu & nke dị ugbu a na ntinye sistemụ na ngwa semiconductor ngwa maka ndị mmekọ ụwa.